11:22 - 13 Jul
Wakiilka gaarka ah ee Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, Michael Keating (dhexda) ayaa la hadlaya weriyayaasha xili Qaramada Mioobay soo bandhigaysay warbixin ku saabsan xuquuqda madax banaanida fikirka ee lagu qabtay magaalada Muqdisho, Soomaaliya, 4tii bishii Sagaalaad ee 2016. Bidix waxaa fadhiya ku xigeenka Wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, Raisedon Zenenga. Midigna waxaa ka xiga Kirsten Young, oo ah madaxa xuquuqul insaanka ee howlgalka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya. UN Photo
Qaramada Midoobey oo sheegtay in xorriyadda hadalku muhiim u tahay kala guurka siyaasadda Soomaaliya
Warbixin ay xorriyadda hadalka Soomaaliya ka soo saartay QM ayaa lugu soo dhaweeyey horumarka dalku indhawaalahan ka sameeyey ballaarinta nifaaska dadweynehu aragtidooda uga dhiibanayaan siyaasadda dalka.
Warbixinta Qaramada Midoobay ee xorriyadda hadalaka ee Soomaaliya ee lasoo saaray Axaddi ayaa tilmaantay horumarka laga gaaray maamul dhisidda Soomaaliya, laakiin warbixintu waxay sidoo kale soo bandhigtay xaaladaha aadka u adag ee ay kusii jiraan wariyeyaasha, difaacayaasha xuquuqul insaanka iyo
Weriyayaasha Kismaayo oo galay sawir jamaaci gebegebada tababar ku saabsanaa soo tabinta doorashooyinka. Sawir QM
UNSOM oo Kismaayo ku marti galisay tababarka suxufiyiinta ee tebinta doorashooyinka
Hawlgalka Qaramada Midoobay ee kaalmaynta Soomaaliya (UNSOM) ayaa soo gabagabeysay tababar laba maalin ah oo ku saabsan tebinta hanaanka doorashada oo loo qabtay saxafiyiinta Kismaayo.
Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha-Guud oo codkiisa ku biiriyay dadka Soomaalieed oo ku guda jira xuska Maalinta Xuquuqul Insaanka
UNSOM oo tababar doorashooyinka ku saabsan siisay wariyeyaasha Baydhabo
Tababar labo maalin ah oo loogu talagalay saxafiyiinta Soomaaliyeed oo ku saabsan tebinta doorashada ayaa manta la soo gaba gabeeyay waxayna ka qayb galayaasha sheegeen in ay dareemeen inay si fiican diyaar ugu yihiin inay tebiyaan doorashooyinka soo socda ee dalka.
Guddiga Doorashooyinka Heer Fadaraal ee Soomaaliya oo sheegay in hawlaha doorashooyinka 2016 ay si habsami leh u socdaan
Hawlaha doorashada 2016 waxay u socdaan sidii loogu talo galay, sida uu ku dhawaaqay Guddoomiyaha Guddiga Fulinta Hawlaha Doorashooyinka heer Federaal (FIEIT), Cumar Maxamed Cabdulle, oo maanta ka hadlayey shir jaraa’id oo uu ku qabtay caasimada Muqdisho.
Wakiilka Gaarka ah ee Xoghayaha Guud QM u qaabilsan Soomaaliya (SRSG) Michael Keeting, oo soo dhaweynaya Maamulaha hay’adda Barnaamijka Horumarinta Qaramada Midoobay, Helen Clark, kolkii ay kasoo dagaysay garoonka Aadan Cadde ee Muqdisho, 24-ta Agoosto 2016. Sawir QM
Soomaaliya waxay mareysaa marxalad “marxalad kala guura,” ayey tiri madaxa UNDP Helen Clark
Madaxa Barnaamijka Horumarinta Qaramada Midoobey ee UNDP, Helen Clark, ayaa xaaladda dalku maanta marayo ku tilmaantay mid “yididiilo wacan leh”, ka dib booqasho ay caasimadda Soomaaliya ku timid.
Wariyaal Soomaali ah oo ka qeybglaya tababar ku saabsan qaabka loo tebiyo hanaanka doorashooyinka 2016-ka, 21 Agoosto, Muqdisho. Sawir QM
UNSOM oo tababar la xiriira tabinta doorashooyinka u billowday suxufiyiin
Hawlgalka Taakuleynta Soomaaliya ee Qaramada Midoobey (UNSOM), ayaa billaabay tababarro tixane ah oo warfidiyeenka gudaha lugu barayo qaabka loo tabiyo wararka la xiriira hannaanka doorashooyinka lugu wado in ay dhawaan dalka ka qabsoomaan.